Haddii Kooxda Ole Gunnar Solskjaer Ee Man United Ay Guuldaro Kala Kulanto Chelsea, Su'aalihii Hore Oo Dhan Ayaa Soo Noqon Doona. - GOOL24.NET
Haddii Kooxda Ole Gunnar Solskjaer Ee Man United Ay Guuldaro Kala Kulanto Chelsea, Su’aalihii Hore Oo Dhan Ayaa Soo Noqon Doona.
Manchester United ayaa isku diyaarinaysa kulanka adag ee FA Cupka ay Stamford Bridge kula ciyaari doonto kooxda Chelsea waxayna Ole Gunnar Solskjaer iyo kooxdiisa United u noqon doontaa imtixaankii ugu waynaa maadaama oo laga sugayo qaabka ay uga falcelin doonaan guuldaradii ugu horaysay ee waqtigii uu Old Trafford maamulayay soo gaadhay.
Manchester United ayaa halis wayn ugu jirta in ay ka hadho tartanka Champions league kadib guuldaradii 2-0 ka ahayd ee ay PSG kagala kulmeen Old Trafford, laakiin guuldaro kale oo ka soo gaadhay Chelsea waxay soo gaba gabayn kartaa rajadii koobabka ee xili ciyaareedkan ay United qabtay.
Manchester United waxay ku dhex jirtaa dhaawacyo waqti xaasaasi ah soo gaadhay qaar ka mid ah ciyaartoyda muhiimka ka ahaa shaxda Ole Gunnar Solskjaer waxaana la sugayaa qaabka uu Ole Gunnar ku xalin doono maqnanashaha Martial iyo Lingard.
Laakiin Manchester Unnited ayaa kadib kulanka Chelsea waxay ciyaari doonaan kulanka adag ee Liverpool kaas oo isna saamayn kaga yeelan kara kaalinta afraad ee ay ku soo galeen qaab ciyaareedkii fiicnaa ee ay Red Devils ku soo jirtay ka hor guuldaradii PSG.
Haddii ay Manchester United guul kala soo laabto Stamford Bridge, waxaa soo laaban doona su’aalihii hore ee Manchester United layska waydiinayay iyo sida ay u adag tahay in Ole Gunnar Solskjaer uu xilka si rasmi ah ugu guulaysan karo.
Waxaa hore u soo baxay warar sheegayay in maamulka Man United ay awooda Ole Gunnar Solskjaer ku qiimaynayaan kulankii PSG, kulanka Chelsea iyo waliba kan Liverpool waxayna guuldaro ka soo gaadha United sabab u noqon in kulanka Liverpool ay wajihi doonaan iyada oo kalsoonidu hoos uga sii dhacday.
Khadka dhexe ee Manchester United ayaa kulankii PSG ahaa mid burburay iyada oo Marco Verratti oo dhaawac ka soo laabtay uu u awood sheegtay Nemanja Matic iyo Ander Herrera halka Marquinhos uu si shaqsi ah u calaamadiyay Pual Pogba.
Inkasta oo Chelsea ay xili ciyaareedkan si xun ugu soo liidatay kulamada muhiimka ah intooda badan isla markaana uu Sarri ku soo dhibtoonayay sidii uu xal ugu heli lahaa in qorshihiisii khadka dhexe qorigiisa la qabtay, haddana iyada oo Blues garoonkeeda ku ciyaaraysa waxay United ku noqon doontaa kulan aad u adag.
Ka hor kulankii PSG, jamaahiirta Man United ayaa u ololaynayay in Ole Gunnar Solskjaer si rasmi ah kooxdooda loogu magacaabo laakiin halyaygii hore ee Man United ee Gary Neville ayaa maamulka sare ee United ka dalbaday in ayna Ole Gunnar Solskjaer kooxda si rasmi ah ugu magacaabin ilaa inta ugu yaraan la gaadhayo bisha March.
Si kastaba ha ahaatee, guul ay Man United ka soo gaadho Chelsea waxay soo celin kartaa kalsoonidii ciyaartoyda United iyo Ole Gunnar Solskjaer ee dhulka ku dhacday guuldaradii PSG, halka guuldaro ay Red Devils kala soo laabto Blues ay su’aalihii hore ee shaqada United si buuxda u soo celin doonto.